အခြား - ဆီးချို သွေးချိုစစ်စက် Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အခြား classified: အသစ် ဆီးချို သွေးချိုစစ်စက်
👉👉ဆီးချို သွေးချိုစစ်စက် (မြန်မာနိုင်ငံ FDA လက်မှတ်ရထားတဲ့ တစ်သက်စာ အာမခံပါပါတယ်ရှင့်) Price ~ 21000 Sinocare တစ်စုံမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ — Digital စက် — အပ်စိုက်တံ — pocket အိတ်အသေး — Strips ပြား ( ၂၅ ချောင်း ) — အပ် ( ၂၅ ချောင်း ) *** Strips ပြား, အပ် တွေပစ္စည်းကုန်ရင် အချိန်မရွေးဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ရှင်.... 👉👉 Stripes ပြားသီသန့်လဲအချိန်မရွေးရပါတယ်နော်.. တစ်ဘူး (၂၅ချောင်း) — 10000 ကျပ် + free အပ် ၂၅ ချောင်း ဝယ်သူကြောင့်စက်ပျက်တာမဟုတ်ပဲ, စက်ရုံ error ကြောင့်စက်ချို့ယွင်းခဲ့ရင်ဘယ်ချိန်လာလာ အသစ်တစ်လုံးပြန်လဲပေးပါတယ်ရှင်..!!! 👌👌 မြန်မာနိုင်ငံ FDA လက်မှတ်လည်းရပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုလို့ရပါပြီနော်..!!! 👍👍 အသုံးပြုရတာအရမ်းလွယ်လို့ ဘိုးဘိုး ဘွားဘွား ဖေဖေမေမေ အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဆရာသမား လူကြီးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တိုင်သုံးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆောင်ထားလို့ရပါတယ်နော်..!!! စျေးနှုန်းလည်းသက်သာ, စက်လည်းအာမခံပါတဲ့အတွက် အမြန်ပဲဆောင်ထားလိုက်တော့နော်..!!!! 09779975467 ရန်ကုန်အိမ်အရောက်ငွေချေပါ။